Orinasa afaka haba Efa mihatra ilay karama farany ambany
Nihatra nanomboka tamin’ny faran’ny volana jona lasa teo avokoa ilay karama farany ambany 200.000 Ar ho an’ny ankamaroan’ireo mpiasa eny anivon’ny orinasa afaka haba eto amintsika.
Ny mampalahelo anefa raha ny resaka nifanaovana tamin’ireo mpiasa sasantsasany dia zary lasa hiharan’ny antsojay izy ireo. Vao misy zavatra tsy mety hataonay na dia kely aza dia mahazo fampitandremana avy amin’ny mpampiasa. Hahenan’ireo mpampiasa tsikelikely ihany koa ny mpiasa, hoy hatrany izy ireo ka raha nahatratra 50 isa ny tao anatin’ny chaine iray teo aloha dia lasa 40 isa sisa ankehitriny. Misy ihany koa ireo mandefa ny mpiasa tranainy rehetra tsikelikely ka tafiditra avokoa raha vao mihoatra ny roa taona ary mampiditra mpiasa vaovao indray izy ireo. Miantso ny tokony hijeren’ireo tompon’andraikitra ny olana sedrainy ireo mpiasan’ny orinasa afaka haba eto amintsika ho fiarovana hatrany ny zon’ny mpiasa.